AMISOM: 8-magaalo ayaan Al-shabaab kala wareegnay - Wargeyska Faafiye
AMISOM: 8-magaalo ayaan Al-shabaab kala wareegnay
Madaxda Midowga Africa ee arimaha Soomaaliya Maman Sidikou ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida oo wada jira ay tan iyo bishii September ay dagaalamayaasha Al-shabaab kala wareegeen 8-magaalo oo ay saldhigyo waa weyn ay ku lahaayeen Al-shabaab.
Maman Sidikou waxa uu shaaca ka qaaday goobaha ay Al-shabaab ay kaga harsan yihiin ay yihiin Jamaame, Jilib, Buale iyo Sakow oo kwada tirsan Jubada dhexe, sidoo kale Diinsor oo ka tirsan gobolka Bay iyo Bardhere oo ka tirsan gobolka Gedo.
Sidoo kale waxa uu sheegay in ay jiraan degaano yar ay Xarakada Al-shabaab kaga sugan yihiin sida El-Dere oo hoostagta gobolka Shabeelaha dhexe.
Sidikou ayaa ka qeyb galay kulankii ka dhacay wasaarada gaashandhiga ee fursad kordhinta loogu sameeyey dagaalamayaasha Al-shabaab inay isku soo dhiibaan xukuumada Soomaaliya.
Sidikou waxa uu tilmaamay inuu wanaagsan yahay hada xaalada amaan ee magaalada Muqdisho.
Madaxda midowga Africa ee arimaha Soomaaliya Maman Sidikou ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in ay dib isku soo uruursadaan dagaalamayaasha Al-shabaab.
Meelihii ugu dambeeyey ee lagala wareegay Xarakada waxaa ugu muhiimsanaa degmada Baraawe ee xarunta gobolka Shabeelaha hoose.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsWasiir shirka ka qeyb galayay oo la afduubtayXoghayaha QM Oo Somaliland Ka Gudbiyey Warbixin Ka Dhana Muranka Xukumada Iyo Mucaaradka.Ismiidaamin ka dhacay Afgooye.Al-Shabaab Plans to Attack US Forces Prompted Recent Airstrike in Somalia.Chelsea will face Swansea in the Capital One Cup semi-finals, while League Two Bradford City will take on Aston Villa.